अनसनको आज पाँचौ दिन डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै, अस्पताल जान मानेनन् « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०७७, शुक्रबार १९:५०
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डाक्टर गोविन्द्र केशी ५ दिनअघि देखि जुम्लामा अनसन बसिरहेका छन् । १९ औं अनसनको ५ औं दिन शुक्रबारदेखि डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिन थालेको उनका सहयोगीहरुले बताएका छन् ।
५ दिनदेखि विभिन्न माग राख्दै अनसनरत डा.केसीले रगत परीक्षण गर्न नमानेको र नशाबाट सलाईन लिन तथा अस्पताल जान नमानेको उनको सहयोगीहरुले बताएका छन् । उनका सहयोगीले डाक्टर केसीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाबारे एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउँदै उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रन लागेको बताए । अनसनका क्रममा रहेका डा. केसीलाई चक्कर लाग्ने, मुटुको चाल बढ्न थालेको, मांसपेसी बाउडिने, छाती दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, पिसाबको मात्रामा कमी आएको र प्रेसर कम हुँदै गएको जनाइएको छ ।
उनी अनसनमा बसेपछि डाक्टर प्रवीणकुमार गिरी, डाक्टर अनुप मंगल समाल र सनिना थापा लगायतले डा. केसीको स्वास्थ्य जाँच गरिरहेका छन् । डा. केसीको रगतमा चीनीको न्यून भइ प्रमूख अंगहरुमा जटिल समस्या देखिन सक्ने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुँदा संक्रमणको खतरा रहेको स्वास्थ्य निगरानीमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
कोरोनाबाट निधन भएका व्यक्तिको कुशको शव बनाएर अन्त्यष्टि